नेपालमा ७२ प्रदेश छन् भनेपछि ट्रोल बनिन् पूजा शर्मा « Dainik Online
नेपालमा ७२ प्रदेश छन् भनेपछि ट्रोल बनिन् पूजा शर्मा
काठमाडौँ । नेपालमा ७२ प्रदेश र १४ वटा जिल्ला भएको बताएपछि नेपाली अभिनेत्री पूजा शर्मा ट्रोलको शिकार भएकी छिन्।
आफ्नै देशमा रहेका जिल्ला र प्रदेशको बारेमा समेत सामान्य ज्ञान नभएको भन्दै सामाजिक प्रयोगकर्ताले उनको विरोध गरेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा दिएको एक अन्तरावार्तामा पूजाले नेपालमा १४ जिल्ला र ७२ प्रदेश रहेको बताएकी थिइन्।
कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले अन्तरवार्ताका क्रममा केही बेर बाहिरी कुरा गरौँ न भन्दै राजतीति र नेपालको भूगोलका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। तर उनले दिएको गलत जवाफले उनी ट्रोल बनेकी हुन्।
के थियो प्रश्न ?
उनलाई कार्यक्रम प्रस्तोताले नेपालमा यतिखेर कतिवटा प्रदेश छन् ? भने प्रश्न गरेका थिए। शर्माले ७२ वटा भएको भन्दै जवाफ दिइन्। यो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि उनलाई नेपालमा कति वटा जिल्ला छन् भनेर अर्को प्रश्न गरियो। यसमा पूजाले १४ वटा भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्।
उनले राजनीतिका बारेमा पनि केही प्रश्न गरेका थिए। उनले पूजालाई नेपालका अर्थमन्त्रीको नाम सोधेका थिए। पूजाले जवाफ दिन नसकेपछि पूर्वसञ्चारमन्त्रीको नाम सोध्छन्। पूजाले यसको पनि जवाफ थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
उनलाई नेपालका ५ वटा मन्त्रीको नाम भन्नुहोस् भनेर पनि सोधिएको थियो, त्यसको जवाफमा उनले वामदेव गौतम, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नाम लिएकी थिइन्।
राजनीतिप्रति आफ्नो चासो नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि प्रस्तोताले उनलाई नेपालका जिल्ला र प्रदेशका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। जसको गलत जवाफ दिएका कारण पूजा ट्रोलको शिकार भएकी हुन्। अहिले प्राइम टेलिभिजनले उक्त अन्तवार्ताको भिडियो आफ्नो च्यानलबाट हटाएको छ।